Ingxelo yeBrightTALK yeBenmarkmark: Ezona zenzo zibalaseleyo zokuKhuthaza iWebinar yakho | Martech Zone
NgoMgqibelo, Julayi 14, 2018 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
UkukhanyaTALK, ebipapasha idatha ye-webinar benchmark ukusukela ngo-2010, yahlalutya ngaphezulu kwe-14,000 ii-webinars, ii-imeyile ezizigidi ezingama-300, ukutya kunye nokunyusa intlalontle, kunye nezigidi ezili-1.2 zeeyure zokuzibandakanya kunyaka ophelileyo. Ingxelo yonyaka inceda abathengisi be-B2B ukuthelekisa intsebenzo yabo kunye nezo mveliso zabo kwaye babone ukuba zeziphi iinkqubo ezikhokelela kwimpumelelo enkulu.
Khuphela iNgxelo yeBenchmark
Ngo-2017, abathathi-nxaxheba bachitha i umyinge wemizuzu engama-42 ukubukela i-webinar nganye, iipesenti ezingama-27 zonyusa unyaka-ngaphezulu-konyaka ukusuka ngo-2016.
Ukuguqulwa kwe-imeyile kubasayine be-webinar bebephezulu ngama-31 epesenti ukusukela kunyaka ophelileyo, Isiphumo esithe ngqo sokuthengisa okuphuculweyo kokuqonda kwizihloko ezikhethiweyo zabaphulaphuli.
Umthamo opheleleyo weewebhu kwiiqonga zeBrightTALK inyuke ngama-40 epesenti unyaka-ngaphezulu konyaka, ucebisa ukuba ii-webinars kunye neentetho zobungcali sisixhobo esibaluleke ngakumbi ekuthengisweni kwamabali okuthengisa.
IiWebinars ziguqula zibe Umxholo wevidiyo ofunwayo. Phantse isiqingatha sokubonwa kwe-webinar kwenzeka kwiintsuku ezili-10 zokuqala kulandela isiganeko esiphilayo.
UngayiPhucula njani i-Webinar yakho
Mhlawumbi olona lwazi lubaluleke kakhulu endilufumene kwingxelo yayikwizicwangciso zokukhuthaza iwebhsayithi yakho ukwandisa ukubakho. Kubathengi bethu, ii-webinars ziyaqhubeka nokuba sisibonelelo esingaqhelekanga sezikhokelo. Sifumene ukuba abantu abazimasa ii-webinars bahlala nzulu kumjikelo wokuthenga kwaye bajonge ukuqinisekisa okanye bafunde ngakumbi ngotyalo-mali abaza kulwenza. Umcimbi, ewe, indlela yokuqhuba njengamathuba amaninzi kangangoko unako apho.
Ngombulelo - UkukhanyaTALK ibonelela ngeendlela ezilungileyo apho:
Iinkqubo zeWebinar zibona impumelelo xa zikhona kwaziswa kwangoko (iiveki ezi-3-4 ngaphandle), kwaye uqhubeke ngalo mhla wokuphila.
Uninzi lwabaphulaphuli bakho luya kuba nalo ubhaliswe kwisithuba seeveki ezimbini yomsitho ophilayo. La maxabiso ahlala engaguquguquki kule minyaka mithathu idlulileyo.
IBrighttalk icebisa ukuthumela ukukhushulwa kwe-imeyile ezintathu, kunye neyokugqibela ngosuku lwewebhu uqobo.
Ukuguqulwa kwe-imeyile kwiiwebinars bezinyuke nge-31% ngaphezulu kweenyanga ezili-12 ezidlulileyo, kwaye zenyuka nge-35% ngempelaveki
Amanqanaba okuguqula ukukhuthaza ii-webinars zazicekeceke ngeveki yomsebenzi, nge uLwesibini ukwenza kakuhle.
Amaxabiso okubakho ngoku ahleli ethe tyaba NgoMvulo ukuya ngoLwesine kodwa nkxuza i8% ngolwesiHlanu.
The Elona xesha lilungileyo lokucwangcisa i-webinar ngu-8: 00 am ukuya ku-9: 00 am (PDT, North America).
UkukhanyaTALK abathengi baqhuba i-46% yobhaliso lwabo lwewebhu ngokudlulisa ngokwabo (i-imeyile, intengiso, intlalo, njl.njl. I-36% yeendlela zikhokelela zivela kwi-organic traffic.
Ndingacebisa kakhulu ukukhuphela kunye nokufunda ingxelo epheleleyo edityaniswe yiBrightTALK, kukho itoni yexabiso kule ngxelo yomgangatho!
UkukhanyaTALK izisa iingcali kunye namashishini ndawonye ukuze bafunde kwaye bakhule. Ngaphezulu kwe-7 yezigidi zeengcali ezibandakanya ngaphezulu kwe-75,000 yeentetho zasimahla kunye neengqungquthela ezili-1,000 2002 ezikwi-Intanethi ukufumana ubuchwepheshe obutsha, ukufunda kwiingcali ezithembakeleyo kunye nokwenza ngcono amakhondo emisebenzi. Amawakawaka amashishini asebenzisa umxholo we-AI weBrightTALK kunye namandla okuthengisa iqonga lokukhulisa imali. IBrightTALK yasekwa ngo-30 kwaye yonyusa ngaphezulu kwe- $ XNUMX yezigidi kwi-capital capital. Abaxhasi baquka iSymantec, JP Morgan, BNY Mellon, Microsoft, Cisco, kunye neeNkonzo zeWebhu zeAmazon.
tags: iqweshaukuthengisa umcimbiUkuthengisa iWebinarUkuthengisa kwiwebhuUkunyuswa kwewebhu